Tatitra Tsy Miankina Manolotra Fahitana Manahirana Momba Ny Zo Nomerika Ao Ekoatera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2016 13:53 GMT
Misy maro ireo olona malaza amin'ny politika any Ekoatera. Iray amin'ireo olona malaza ireo i Martha Roldós, mpikambana teo aloha tao ami'ny parlemanta avy amin'ny Guayaqui; nalaza tamin'ny fanoherany mahery vaika ny fitondran'ny filoha Rafael Correa. Tamin'ny 2014, niteny tamin'ny haino aman-jery i Roldós hoe nisy “nanafika” ny kaontiny imailaka, nolazainy fa taratasy iray nalefa tao amin'ny kaonty imailaka azy manokana no nisy nangalatra ary namoaka “teny isan-teny” tao amin'ny gazety tantanan'ny fanjakana El Telégrafo”.
Tamin'ny famoahana ilay taratasy, nitatitra koa ny El Telégrafo hoe mikasa ny hametraka “tetikasa haino aman-jery” any Ekoatera i Roldós sy olona maro hafa. Ny tetikasan'i Roldós , Fundación Mil Hojas (Fikambanana Arivo Pejy), dia efa nisy nandritra ny herintaona araka ny fisehoany. Mifantoka amin'ny fanaovana gazety fanadihadiana, mitatitra indrindra indrindra ny mangarahara sy ny kolikoly – olana izay matetika no nibahan-toerana tao an-tsain'ny haino aman-jery nasionaly.
Tamin'ity taona ity, namoaka tatitra hafa ho an'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'olombelona ny vondrona misy an'i Roldós – miaraka aminà fikambanana Ekoatoriana hafa antsoina hoe Usuarios Digitales (Mpampiasa fitaovana Nomerika), mialohan'ny fihaonana ara-potoana fandinihana ny zon'olombelona amin'ny May 2017. Ny tena ifantohan'ny tatitra dia ny toe-draharahan'ny firenena miaraka amin'ny zo hanana fiainana manokana nomerika manokana sy hahazoana vaovao.
Araky ilay tatitra, “Tarika mpisompatra informatika: rindrankajy mpitsikilo any Amerika Latina“, nanome tolotra ho an'ny Minisitry ny Atitany tamin'ny tapaky ny volana jona 2015 ilay orinasa Italiana. Notondroin'ity farany ny filàny “Foibe Nasionaly Fanarahamaso mahenika ny firenena” izay mety ho afaka hanomboka hiasa ny Oktobra 2016. Ity tatitra ity, izay mifototra amin'ny vaovao navoakan'ny Associated Press, dia milaza fa “avy amin'ireo taratasy elektronika niparitaka no nivoahan'ny porofo fa ny governemantan'i Rafael Correa dia nampiasa ilay rindrankajy mpitsikilon'ilat Tarika Mpisompatra mba hanarahana maso an'i Carlos Figueroa, mpikatroka amin'ny haino aman-jery sy politika, izay notazonina an-tranomaizina nandritra ny volana enina noho ny “nanompàny ny filoha”
Mitatitra ny Usarios Digitales fa efa nanao fanamarihana momba ireo kaonty sandoka anaty tambajotra ara-tsosialy izay nampiasaina mba hanapariahana fandrahonanana ho an'ireo maneho hevitra manohitra ny fomba fijerin'ny governemanta Correa. Fanampin'izay, nohadihadian'ilay vondrona ny fomba nanehoana ny fanenjehana an-tserasera. Ohatra, navoakan'ireo manampahefana ny anarana sy ny torohay manokan'ireo mpampiasa haino aman-jery mafana fo. Angamba ny raharaha izay manandanja indrindra amin'ny vahoaka dia ny tantaran'i “Crudo Ecuador”, izay nanesoan'ny Filoha Correa an-tserasera an'i Gabriel Gonzales tamin'ny nandaozany ny Aterineto.
Milaza koa ny tatitra fa ny Fundación Mil Hojas, Plan V, sy Focus Ecuador dia nitatitra fisianà “fanafihana an-tserasera” nanjo ny tranonkalany tamin'ny May 2016. Ny andro talohan'izay, namoaka vaovao momba ny fifanarahana ara-tsolika sy ny fandraisana anjaran'ny solontena voalohan'ny Petroecuador sy ny minisitry ny solika teo aloha ireo tranonkala ireo.